Uyilo lweGoogle Pixel 3 XL luhluziwe ngenxa yomenzi wamatyala | Iindaba zeGajethi
Ayisiyo eyokuqala kwaye ayizukuba lixesha lokugqibela ukuba i-smartphone ivuzwe ngokuthe ngqo ngenxa yomenzi wamatyala okanye izixhobo. Kule meko sinemifanekiso ongayibona ngaphezulu kwale migca, nge uyilo lwesixhobo esilandelayo sikaGoogle, iPixel 3 XL.
Ukubanjwa akubangeli mathandabuzo kwaye le modeli intsha kaGoogle inokongeza "inotshi" enempikiswano eyathi yathandwa yiApple nge-iPhone X yayo. Yonke into ibonisa ukuba le iya kuba yeyona modeli inkulu nangona kuyinyani ukuvuza kwangaphambili Le modeli kaGoogle iya kuba nenotshi kuzo zombini ezi nguqulelo.
Ababukeli beentaba banayo yonke into ekulungeleyo ukwenza intetho yabo
Kubonakala ngathi isixhobo besele sikulungele ukuba singeniswe ngekota yesithathu yonyaka yiyo loo nto abavelisi beqweqwe, izindlu kunye nezinye izinto zinemilinganiselo kunye noyilo olucingelwayo lwesiphelo sendlela ezandleni zabo. Bonke abavelisi bahlala benolwazi ngaphambi kokuba isixhobo sisungulwe ukubonelela ngemfuno yezixhobo kwaye kule meko iGoogle Pixel XL isondele kakhulu ekutyhilweni ngokusemthethweni.
Ukucaciswa kwezi Pixels kuhlala kunamandla kakhulu kwintengiso kwaye kufanele ukuba kongeze iprosesa I-Qualcomm Snapdragon 845, malunga ne-6 GB ye-RAM kunye nesiseko sangaphakathi se-64 GB. Kodwa ukuba kukho into emileyo malunga neePixels yikhamera kwaye kule ngqondo kulindeleke ukuba ibe luhlobo oluphuculweyo lweePixels zangaphambili, iya kongeza i-Android P kwaye kunokwenzeka ukuba ixabiso leemodeli ezintsha lonyuke kancinci xa kuthelekiswa nohlobo lonyaka ophelileyo. .
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Uyilo lukaGoogle Pixel 3 XL luyavuza ngenxa yomenzi wecala